BUCKETS Manufacturers and Suppliers - China AKWUKWU Factory
DITCHING ọcha akpa
ILLỌ DITCH akpa
AKWVKWỌ AKW RKWỌ AKWETKWỌ
SKELETON SCREENING BUKKET
ROTARY REKP BTARA BUCKET
OLỌ AKW .KWỌ
AKWGKWỌ AKWOKWỌ AKW .KWỌ
ND OTHER ỌZỌ
Efere ime ụlọ
Ogwe aka & ọganihu
Ogologo iru ogwe aka & ọganihu
AKWKWỌ AK LKỌ KWES LR L KWES &R & ỌR & & ARM
MGBE AH AR
Onye na-ebu ụgbọelu
Ejiri akpụkpọ ụkwụ
Mgbazi / Tensioner
Amphibious Undercarriage - Enyemaka
Ihe Ngwuputa Amphibious
Faclọ ọrụ anyị
Ngosi & Nleta
Akaebe Ndị Ahịa
Otu & Omenala
Emere maka igwu ala. Brandsdị dị iche iche nke ndị na-egwupụta ihe na ndị na-agba azụ azụ nwere ike dakọtara n'ụzọ zuru oke. Tumadi eji maka a dịgasị iche iche nke ngwa na moderately abrasive ihe ndị dị ka unyi, loam, gravel na ụrọ.
Ọkwọ ụgbọ mmiri General DIGGING bọket
Onye na-egwupụta ihe niile na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ọkụ dị ka igwu ala na ibudata ma ọ bụ ụwa, ájá, nkume rụrụ arụ na gravel, wdg. Ikike dị ukwuu, nchara arụpụta ike dị elu na ịwụcha ịwụ elu nwere ike ịchekwa oge opration ma mụbaa ịrụ ọrụ, Nhọrọ nke nhọrọ n'ọnụ dị. mechaa ihe karịrị 1 ruo 80 tọn igwe arụpụtara iji kwado igwe ọrụ.
Bonovo Crusher Bucket bụ azịza ohuru iji mee ka ihe achọrọ na ọrụ taa. N'iji igwe na-etinye ihe na ịwụ, ị nwere ike gwepịa ya na saịtị. Usoro a chọrọ obere akụrụngwa akụrụngwa, obere njem na mkpofu mkpofu yana naanị otu onye na-arụ ọrụ nke na-ejide mgbakwunye mgbakwunye yana bọketị ịwụ.
Bonovo Ditching Clean ịwụ etinyere ditching, sloping, grading na ndị ọzọ na ihicha ọrụ site nnukwu ikike na abụọ mbepụ.
Bonovo Oke Ọrụ ịwụ ngwa maka itinye nkume siri ike na ịnweta mgbe ọ gbawara. A haziri ya maka igwu ala nke ihe ndị kacha abrasive, na ọnọdụ kachasị njọ. E mepụtara Bonovo Extreme Duty Bucket iji mechie bọket nkume ọ bụla. Bọket ndị a siri ike nwere ngwugwu ejiji kachasị ọhụrụ na nke ọhụụ etinyere na bọket.
Bonovo General Duty Bucket ejiri rụọ ọrụ ọkụ dị ka igwu ala na ibudata ụwa, ájá, nkume rụrụ arụ na gravel, wdg. Nnukwu ikike, ike nchara arụ ọrụ na nkwụnye bọket dị elu nwere ike ịchekwa oge ọrụ ma bulie arụmọrụ arụmọrụ.
Bonovo Rotary Screening ịwụ e mere na-siri ike na-amụba arụpụtaghị ihe. Ejiri ígwè siri ike mee ka nyocha nyocha dị nchara.
Bonovo adiana Screening ịwụ ọrụ mfe sifts si ala na irighiri ihe, site spinning Screening Drum. Nke a na - eme ka nzacha dị ngwa ngwa, dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
Bonovo Siri ike ịwụ ịwụ nwere atụmatụ: Ike na inogide; akwa na-eguzogide ígwè NM400 ma ọ bụ Hardox na-eji mee isi efere agụba, akụkụ agụba efere na mkwado efere nke isi efere. Mkwado ume, efere nchebe efere, nchebe efere na raara onwe ya nye ịwụ nkwụnye ae nakweere, nke budata mbo mbuli elu abrasive na ekwe nke ịwụ.
Ngwa: Maka igwu ala siri ike nwere rubble siri ike ma ọ bụ na-ebugharị ahịhịa na gravel, ịwụ ike na-etinye ngwa ngwa abrasive dị ka nnukwu nkume. Bọketị na-enye nchebe dị elu nke mkpuchi nchebe maka ogologo ndụ na ngwa ngwa abrasive.
Bonovo Skeleton Screening Bucket ka etinyere na ihe rụrụ arụ na gọọmentị, ọrụ ugbo, oke ọhịa, ọrụ nchekwa mmiri, nha ihu nha na-anabata ịhazi nke dabere na gburugburu ebe ndị ahịa na-arụ ọrụ.
Bonovo Tilt Okporo mmiri ịwụ achịkwa ka siwing site cylinder na nnukwu n'akuku bụ ruo 45 ogo. A na-eme ya iji rụọ ọrụ ọkọlọtọ, nhazi na ihe ọkụkụ na-ebugharị na-enweghị ihe na-agagharị agagharị, nke nwere ike belata iyi igwe na oriri mmanụ.
Bonovo Underground Loader ịwụ bụ ihe pụrụ iche maka scooptram maka Ngwuputa. Bọket R1300 ， R1600, R1700 ， R2900, LH410, LH517, ST1030 bọket na-ewu ewu. ma e wezụga ịwụ Ọdịdị, BONOVO-enyekwa dochie ezé usoro maka Bonovo Underground Loader ịwụ nakwa dị ka mesikwuru atụmatụ dị ka Ahịa 'chọrọ.
Bonovo Clamshell ịwụ maka excavators bụ maka ihe onwunwe re-njikwa na dredging.
E kewara ya na nsụgharị ọkụ, ọkọlọtọ, na ọrụ dị arọ ma na-egosipụta ntụgharị nrịgo 360 akara, ngalaba ahụ dịkwa maka ngwa gburugburu ebe obibi.
Kpọtụrụ anyị Denye aha
Ekwentị: + 86-0516-87533040
Copyright - 2006-2021: All Rights echekwabara.